U Gaar Dumarka : Ragga Ma Jecla Haweeneyda Wax Ka Sheegta Dhigeeda Iyo … | alcarabiya.com
Home » Arimaha Qoyska » U Gaar Dumarka : Ragga Ma Jecla Haweeneyda Wax Ka Sheegta Dhigeeda Iyo …
U Gaar Dumarka : Ragga Ma Jecla Haweeneyda Wax Ka Sheegta Dhigeeda Iyo …
Arimo badan ayaa jira oo ay haweenka aan si ula kaca aheyn u sameeyaan balse si weyn uga careysiisa ragga , waxa ayna tilmaamahaan saameyn ku reebaan ninka ee gabaryaheey il gaar ah u yeelo.
Ragga si weyn ayay u dhibsadaan haweenka sida weyn u canbaareeya ee wax uga sheega dhigooda kale ee haweenka mar waliba .
Sidoo kale midda hinaasaha badan oo la dhihi karo marara qaar waa ka badbadis , waxa ayna si weyn u neceb yihiin haweeneyda jecel in xilli waliba iyo goob waliba in ay garab taagnaato ninka .
Arimaha Quruxda Iyo lifestyle-ka Halkaan Ka Aqrisso Hadda Ka Dib Ninka ragga uma dul qaadan karo haweeneyda wax aan sidaa u sii weyneyn ku ooysa , sidoo kale haweeneyda sida weyn u jecel ka soo dukaameysiga suuqa si ka bad badis ah .
Ugu dambeyntii haweeneyda hadalka badan ninka uma dul qaadan karo ee gabaryaheey hadaad leedahay dabeecadahaan iska bedel si ninkaada aadan u saameyn.	Alcarabiya.com
One Response to U Gaar Dumarka : Ragga Ma Jecla Haweeneyda Wax Ka Sheegta Dhigeeda Iyo …	samira Reply
December 8, 2012 at 7:57 pm	Asc webka al carabiya arintan aniga aya ah se liskiga baba shaa